मेमोरी किङ्ग विजय शाहीको सम्झने सुत्र यस्तो छ ! यो शुत्र सबैलाई काम लाग्छ ? – Complete Nepali News Portal
मेमोरी किङ्ग विजय शाहीको सम्झने सुत्र यस्तो छ ! यो शुत्र सबैलाई काम लाग्छ ?
ScotNepal July 20, 2020
तीस सेकेण्डमा एक सयभन्दा बढी शब्द सम्झेर कालिकोटका १९ वर्षीय विजय शाही अहिले चर्चामा छन् । उनलाई तेजस्मरणशक्ति भएका विश्वका कीर्तिमानी मानिएको छ ।
उनी कालिकोटका स्थानिय युवा हुन् । उनले ३० सेकेण्डमा १ सय भन्दा बढी शब्द सम्झेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका हुन् ।
विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि शाहीलाई अहिले अन्तरवार्ता दिन भ्याइ नभ्याई छ । उनले एउटा निकै ठूलो किताव सररर हेर्छन् त्यसपछि त्यो किताब बन्द गरेर त्यसमा भएका शब्द उत्तिखेरै सुनाउन र लेखेर देखाउन सक्छन् ।
अस्ट्रेलियाको जिलोङमा पहिलो पटक पृथ्वी जयन्ती
डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीको संयुक्त विज्ञप्ति